Arin ay muhiim tahay in aadan sameynin marka wax cunto kadib (WQ: Dr. Liibaan) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Arin ay muhiim tahay in aadan sameynin marka wax cunto kadib (WQ: Dr. Liibaan)
Ma ogtahay waxyaabaha caadada an ka dhiganey inay halis ku yihiin caafimaadkeena?
Hada walalkeyga Farintaan aqrisanaayo ha sameynin sida hoose marka aad cuntadda cunto .
1- Sigaarka Cabbida hal sigaar cuntada kadib waxay u dhigantaa 10 sigaar adigo cabey , sido kale waxay kordhineysa qatarta kansarka mindhicirada (Bowl cancer or Intestine Cancer) iyo qatarta kansarka Sambabadda ( Lung cancer) Waxaan kula talin lahaa inaad joojiso cabida sigaarka cuntada kadib .
2- Jiifka Jiifku waa wax muhiim u ah qeybaha nolosheena , balse marka wax cuntid inaad seexatid ma haboona sababto ah waxay kugu hogamineysaa xanun inu ku dhaco caloosha amaba raaxo dari ka darento qeybaha caloosha (Abdominal discomfort) sidaas awgeed iskuday in aadan sexanin cunada kadib intaad sexan lahayd qabso howl.
3- Cabbida Shaaxa iyo kaffeyga
Labaduba waxay leyihiin faaidooyin gaar ah iyo waxyeelo balse ma ficna cunada kadib in la cabo , qabiiro nafaqeyayaal ah (Nutritionists ) ayaa waxay so jeediyeen in la cabin shaaha hal saac cuntada kadib.
4- Qubeyska Qubeyska marka cunto kadib waxay kordhisaa isku socodka dhiiga qeybaha jirka marka laga reebo caloosha taaso sababta in cuntadii si fican loo dheefshiidi waaye iyo habdhiska dheefshiidka oo dhib ku yimaada , sug 30 daqiqo kadib qubeyso.
5- Cunnida Miraha (Qudaarta) Miraha waa muhiim balse waxay u baahan yihiin dhecaano iyo waqti dheeri ah si loo dheefshiido , cunidda miraha ( Noocyada Qudaarta) Cuntadda kadib waxay sababtaa in si fican loo dheefshiidi waayo (Indigestion flatulence ) ama laab jeex .
6- Biyo qaboob Ka fogow inaad cabto biyaha qabow isla marki aad wax cunto waayo biyaha qabow uma ogolaanayaan habdhiska dheefshiidka inu si habsami leh howshiisa u qabsado taaso sababi karta qatarta qabsiga (Constipation) .
7- Socodka badanaa dadka waxay dhahaan mar alaala marki aad dhameysato cuntada waxa ugu fican ee la sameyo inay tahay socodka , balse cilmi baaris ayaa waxay sheegeysaa ” waa inaad sugtaa ugu yaraan 30 daqiiqo kahor inta adan socod bilaabin” Tannin waxay fududeyneysa in si sahlan cunadda loo dheefshiido hadi kale ay sababi karto dib uso celinta Aashitada ( Acid reflux) taaso howsheda ahayd burburinta cuntada .
8- Ha dhuujinin Suunka cuntada kadib ma ficna sidaan in la sameyo waayo waxay sababi kartaa xaalad kale oo qatar ah .
9- Gym Jimicsiga iyo Gym-kaba waa muhiim waxayna ka qeyb qataan qaabeynta jirka balse cuntada kadib ma ficna inaad qaado waxyaabo culus (Lifting weight ) amaba jimicsi adag , waayo caloosha waxay u baahan tahay nasasho iyo waqti lagu dheefshiido .
Farintaad uqeybiya dhamaan bulshada , dadka waaweyn , dhalinyarada ( Ragg iyo dumar) , Iyo caruurtuba ,
talaado kasta xog cafimaad idinla wadagi doona . IshallH